चिकन नुस्खाले प्रिन्स, सेब र अन्य डिसेम्बरको साथ भरिएको छ।
पक्षी, र विशेष गरी, चिकन - भान्साको लागि एक धेरै उपयुक्त मासु। यो निविदा, आहारिक र तयार गर्न सजिलो छ। चिकन एकै ठाउँमा भरिएको र अलग भागहरूमा भरिएको हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, छाती वा फलालेट। त्यहाँ धेरै व्यञ्जनहरू छन्। हामी तपाईंलाई3तरिकाको प्रस्ताव गर्दछौं।
चिकन नुहाउन आलु संग भरिएको
2 किलो कुखुरा
लसुनको टाउकोको आधा
ग्रीस को चम्मच 2: तुलसी, अजमोद, डिल।
मेयोनेज र केचअप स्वाद
खुट्टा आलु, जितना सम्भव छ। यो वांछनीय छ - क्यूबेस। त्यसोभए ऊ राम्रो बेक हो। सानो काटनका लागि, तपाईं ठूलो स्टोटर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि सिजन मसाले, नमक र सागको साथ आलु।
चिकन धुनुहोस्, यसलाई सुखाओ, हड्डीबाट सफा गर्नुहोस्। त्यसपछि आलु र सिलाई भर्नुहोस्, वा टुथपिक्सको साथ समाधान गर्नुहोस्।
त्यसपछि मेयनेज र क्याचअपको मिश्रण तयार छ। उनको नमक। त्यसपछि बर्डले मिश्रणको साथमा चिसो लगाइदिन्छ र आस्तीनमा राखियो । सिद्धान्तमा, तपाईं बिना यो गर्न सक्नुहुन्छ। डिश बेक गर्न, ओवन को तापमान 180 डिग्री सेल्सियस हुनु पर्छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, आलु संग भरिएको चिकन को लागि नुस्खा धेरै सरल छ। तर परिणाम धेरै स्वादिष्ट छ।
चिकन नुहाउने सेतोले भरिएको छ
यसको लागि तपाईंलाई आवश्यक छ प्राप्त हुनेछ:
मध्यम आकारको हेन, तर 1.5 किलोग्राम भन्दा कम।
2-3 हरियो सेब
2 कप जमीन को ब्रेडक्रम्ब
1 उकालो अण्डा
प्याज3टुक्राहरू
मेयोनेज र सरसफाइ।2tablespoons
ग्रीस: अजमोद, डिल, तुलसी को स्वाद
साल्ट र काली मिर्च
चिकन भाँडा लिनुहोस्, स्तनमा काट्नुहोस् र राम्ररी कुल्ला गर्नुहोस्। केही समयको लागि छोडिदिनुहोस् यसलाई सुखार्न। त्यसपछि नमक र काली मिर्चको साथ नमक। पक्षी हड्डियों देखि साफ हुनु पर्छ।
अर्को चरण: मेयोनेज लिनुहोस् र यसलाई सहकर्मीमा अण्डा र सरसफाइसँग मिश्रण गर्नुहोस्। कुखुराको मिश्रणमा राम्रो तरिकाले घुमाउनुहोस्। त्यसपछि एक घण्टाको लागि चिकन छोड्नुहोस् र सेबलाई निषेध गर्नुहोस्।
धेरै घनी मासुको साथ उनीहरूको मीठो, थोरै रमाइलो लाग्दैन। आदर्श सेतो सेबहरू छन्। तिनीहरूलाई सफा गर्नुहोस्, बीच काटेर पतली स्लाइसमा काट्नुहोस्।
त्यसपछि कुखुराको छेउबाट कुखुराको पछाडि सुत्न सुरु गर्नुहोस्। कटौती को किनारों टूथपेक्स या पाक थ्रेड संग जुड सकते हो।
चिकन, स्याउसँग भरिएको, लगभग तयार छ। यो केवल ओवनमा राख्न को लागी मात्र रहन्छ, 200 डिग्री भन्दा पहिले। त्र 50 मिनेट हुनुपर्छ।
चिकन नुहाउने फलफूल र मशरूमले भरिएको छ
1.5 किलो कुखुरा
एक पाउन्ड च्याम्पियन
6 पीसी। Prune
50 ग्राम को मक्खन मा मक्खन।
मेयोनेज को आधा एक मिठाई चम्मच
मशरूम धोएर र काट्ने गरिन्छ, राम्रोसँग धोकाएको ब्ल्याक-सलाम। काली मिर्च र नुन मिश्रण गर्नुहोस्। अर्को, चिकन लिनुहोस्। यसलाई धुनु, हड्डीबाट सफा गर्नुहोस्, मक्खन भित्र भित्र मार्नुहोस्। त्यसपछि मशरूम र prunes को एक मिश्रण संग सामान। तपाईं सजिलै संग टूथपेक्स्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चिकन माथिको पेप्ट्रिका साथ रमाईन्छ र मेयोनेजसँग मुस्कुराउँछ।
पक्षी ओवनमा 40 मिनेट तरिइएको छ, जुन 200 डिग्री को तापमानमा गरम हुनुपर्छ। सबै चीज, एक मुर्दाले खुट्टा र मशरूमले भरिएको, तयार छ!
सबै माथिको व्यञ्जनहरू तयार गर्न सजिलो छ र विशेष सामग्रीको आवश्यकता पर्दैन। Bon appetit!
चिकन को लागि खट्टा क्रीम सॉस: नुस्खा, सामाग्री। एक फ्राइङ प्यानमा खट्टा क्रीम सॉसमा चिकन पिरोली
फ्राइङ प्यानमा मासु पकाउने कसरी
बेलुन रोमन गुर्गेनोविच। रचनात्मकता र उत्कृष्ट चलचित्रहरू
के समुद्र को एक बच्चाको लागि पहिलो सहायता किरा समावेश गर्नुपर्छ?
Nosocomial संक्रमण, विधि र सिफारिसहरू को रोकथाम।
अमेरिकी M14 स्वचालित राइफल - आधुनिक हतियार
कसरी, खुला जमीन मा सूरजमुखी बीउ रोपेर गर्न बिरुवा? Ornamental सूरजमुखी कसरी रोपेर गर्न?
NPF Sberbank: समीक्षा। NPF Sberbank: लाभकारी